Mpanongam-panjakana : Hiakatra Carlton -
AccueilRaharaham-pirenenaMpanongam-panjakana : Hiakatra Carlton
Mpanongam-panjakana : Hiakatra Carlton
24/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raharaha tokoa rehefa io fitiavan-tseza sy fahefana io no mibaiko ny tena tahaka ny mahazo ireto mpanongam-panjakana tarihin’i Andry Rajoelina ireto. Hiakatra etsy amin’ny Carlton hono mantsy ity lehiben’ny « potsista » ity anio, manimanina ny taona 2007 nanambarany ny maha kandidà ben’ny tanànan’Antananarivo ny tenany, nanomanany ny fanonganana an’i Marc Ravalomanana ny taona 2009.
Lokomena sy ranomanitra
Araka ny efa nambara tetsy ambony dia hiakatra etsy amin’ny Carlton Anosy i Andry Rajoelina sy ny forongony androany, hamelabelatra ilay antsoin’izy ireo hoe IEM. Miezaka mafy ny mba hahatongavan’ireo avara-pianarana sy tompona orinasa ary mpandraharaha amin’ity androany ity mihitsy izy ireo amin’izany, tsy inona akory fa mba ilazana amin’ny olona hoe “tandremo fa tsy ireo mpandroba magazay na koa ireo mpandoro trano araka ny nahazatra ihany akory no mpanara-dia an’i Andry Rajoelina…!”. Tahaka ireny vehivavy hamonjy fotoana ireny, miezaka manao metimety amin’ny ranomanitra sy lokomena e!
Te hanatsara mafy ny sariny, izay no azo ilazana izao fihetsik’i Andry Rajoelina hiakatra etsy amin’ny Carlton izao. Tiany ho fafana mafy tokoa mantsy ireny fanamarihana maro ireny toa ny hoe DJ, potsista ary indrindra ny anaram-bositra niantsoan’ny “zanaky dada” sy ny TIM azy nandritra ny Tetezamita hoe “foza orana”. Izay no maha zava-doza io fitiavana seza sy fahefana diso tafahoatra io, manitatra ny saina amin’ny tsy tokony ho izy. Amin’ny fomba ahoana no hahatratraran’i Andry Rajoelina ny filoha frantsay, Emmanuel Macron, na dia faniriany mafy mihitsy aza izany?
Mazava araka izany ny tanjon-dry Andry Rajoelina, Rossy ary Sareraka amin’ity androany ity fa izay hoe hanatsaratsara endrika ny mpitarika azy ireo izay, ka nanentanan’izy ireo mafy izay manana kravaty ho avy hanatrika io hetsika ao amin’ny Carlton io. Hitanjaka eo amin’izay araka izany ireo mpandraharaha nahazo tombontsoa nandritra iny fanonganam-panjakana sy Tetezamita dimy taona nampidi-kizo ny firenena iny.
Marihina tsara mantsy fa nisy mpandraharaha matihanina maro nopotehina tamin’ny alalan’ny fandrobana sy ny fandorana teto nandritra ny 26 Janoary 2009 ary nisy olom-bitsy lasa mpanefoefo tampoka ihany koa, ankoatra ireo mpandraharaha hafa nigoka ny tsiron’ny fanonganam-panjakana. Hiafina endrika ao ambadiky ny kravaty avokoa izany karazan’olona rehetra izany androany, hamitahana ny masom-bahoaka. Mazava ho azy fa tsy ho ankasitrahan-dRajoelina loatra ny fahatongavan’ireo zana-bahoaka fanaony sorona eny amin’ny Carlton amin’ity androany ity, satria mifanohitra amin’ny tanjona tiany hotratrarina dia ilay hoe “efa tena avo lenta mihitsy izao i Andry Rajoelina tsy toa ny taloha…!”
Rajaonarimampianina : Nahazo tso-drano tamin’ny zafimaniry
Iray amin’ireo vakoka iraisam-pirenena mampiavaka an’i Madagasikara. Tsy maro ireo filoham-pirenena nitsidika io toerana manan-tantara izay nosokajian’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny vakoka sy ny kolontsaina ho vakoka iraisam-pirenena. Noraisin’ireo olobe sy ny mpitondra tany ...Tohiny
Filoha Turc Recep Erdogan : Hanamafy ny fifandraisany amin’i Madagasikara